Wararka Maanta: Isniin, July 23, 2012-Madaxweyne Sheekh Shariif oo sheegay in Xildhibaannada soo socda ay leeyihiin wax ka bedelka Dastuurka Qabyada ah
Sheekh Shariif wuxuu sheegay in dowladdiisa ay ka go'an tahay inay dhameystirto xilliga KMG ah oo ay ka harsan tahay 25-maalmood, isagoo sheegay in howsha uu hayo ay tahay mid uu ummadda Soomaaliyeed u hayo, balse aysan jirin koox uu si gaar ah ugu shaqeeyo.
"Runtii waa guul in siyaasiyiinta Soomaalida ay heshiis ku gaaraan in la dhameystiro xilliga KMG ah uuna dalku yeesho dastuur. Dastuurka wax ka bedelkiisa iyo wax ku daristiisa waxaa leh baarlamaanka soo socda, afarta sano ama shanta ee soo socotana waa laga shaqeyn doonaa illaa uu afti qaran ka gaaro, eedeymaha loosoo jeedinayo saxiixayaashana waa kuwo sal iyo raad aan lahayn oo la been abuuray," ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya.
"Ma jiro xisbi la yiraahdo Aala-Sheekh oo aan ka tirsanahay, waan ku faanayaan inaan ahay ruux ku dhaggan diintiisa. Waxaa la isugu soo barbaariyay diinta Islaamka ee la iguma barbaarin koox," ayuu yiri Sheekh Shariif. "Waa jirtaa inaan leeyahay saaxiibbo, balse waxaan madaxweyne u ahay Soomaalida oo dhan, intana ma soo gaari lahayn haddaan u fikirayo sida ay dadka qaarkood u fikirayaan."
Ugu dambeyn, madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sheegay in dowladda KMG ah ay soo dhaweynayso cid walba oo kasoo goosata Al-shabaab, isagoo xusay inaysan ogolayn Al-shabaab inay wadahadal la galaan dowladda, balse ay iyaga ka go'an tahay inay soo dhaweeyaan cid walba oo dhankooda kusoo biirta.